Su'aal: Mushkilad miyaa in qofku keligiis isla hadlo?
Author Topic: Su'aal: Mushkilad miyaa in qofku keligiis isla hadlo? (Read 2008 times)
« on: July 30, 2016, 09:51:19 PM »
Salaan kadib, dhaqtarka sharafta leh waxan weydiinayaa "Mushkilad (jirro) miyaa in qofku keligiis isagoo ah isla hadlo?"
Dadka qaar iyaga oo soconaya dadka kalena u jeedaan ayey isla hadlaan. Qaarkood kor ayey u qayliyaan weliba iyaga oo ficil ku daraya sida inay wax tilmaamaan ama faraha fiiqaan sida inay ruux hor jooga la hadlayaan.
Anigu sidaas ma ihi, balse marka aan keligey ahay oon qolkeyga joogo ama aan keligey jidka socdo waan sheekaystaa si cod gaaban ah. Waxyaabaha aan ka sheekaysto waxaa kamid ah tusaale: inaan nafteyda kala tashado ficilo aan samayn doono mustaqbalka dhow, qaabka aan ula hadli doono qof aan balansannahay, inaan sii jilo sida ay noqon doonto khudbad aan jeedin doono ama inaan is madadaaliyo oon heeso, iska qosliyo i.wm.
Dhaqtarka waxaan si xushmad leh uga codsan in uu arrintaas iga jaahil saaro, anigoo garowsan inay tahay wax bulshada Soomalida dhexdeeda aad ugu badan.
Re: Su'aal: Mushkilad miyaa in qofku keligiis isla hadlo?
« Reply #1 on: October 01, 2016, 03:22:58 PM »
Ka akhriso qoraalkaan isla-hadalka noocyadiisa iyo marka uu mushkilad noqon karo: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=6459.0
Views: 12452 January 29, 2012, 12:07:55 PM
Started by IlhaanBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 23710 June 26, 2015, 02:38:58 AM
by Cali Asaaro
Su'aal: Naasaha oo culeys noqda cudur miyaa?
Started by Malinda NassahBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 2068 October 05, 2015, 11:55:17 AM
Su'aal: Tifowga madaxa ku dhaca miyaa jira?
Views: 3256 December 13, 2016, 11:27:45 AM
Su'aal: dhibaato miyaa in aan ahay hyper-sexual?
Started by Ali MuqtarBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 1106 July 04, 2020, 08:18:08 PM
by Ali Muqtar